बेलायतमा बिस्केटजात्रा हुने,पासा पुचः गुथिको साउथ इष्ट लन्डन शाखाका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठ कार्यक्रम संयोजक
२६ फाल्गुन, २०७८ शीतलपाटीन्युज डटकम। 4319
लन्डन। बेलायतमा नेवारी भाषा, संस्कृति र परम्पराको प्रवर्द्धनमा सक्रिय पासा पुचः गुथि यूकेले अब बिस्केटजात्रा आयोजना गर्ने भएको छ। नेवारी समुदायको लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्व बिस्केटजात्रा यस वर्ष पहिलोपटक बेलायतमा मनाउने तयारी गुथिले शुरु गरेको छ।जात्राको संयोजन पासा पुचः गुथि साउथ इष्ट लन्डन शाखाका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठलाई कार्यक्रमको मुख्य संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ।
आइतबार बसेको गुथिको बैठकले आउंदो अप्रिल महिनाको १० तारिख प्लमस्टिडको एशियन कम्युनिटी सेन्टरमा एक विशेष कार्यक्रम गरी बिस्केटजात्रा मनाउने निर्णय गरेको संयोजक माधवलाल श्रेष्ठले कुराकानीका क्रममा शीतलपाटीन्युजका सम्पादक बाचस्पति रेग्मीलाई जानकारी दिए। परम्परागत शैलीमा जात्रामा तान्नको लागि रथ नै तयार गर्ने गुथिको योजना रहेको उनले बताए। गुथिले हरेक दुइवर वर्षमा आयोजना गर्दै आएको ‘नेवा मुना’ को अवसर पारेर यसपटक बिस्केटजात्रा गर्न लागेको हो।
जात्रामा बेलायतभरबाट ५ सय जनाको सहभागिता अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी हुन १५ पाउण्डको टिकट तोकिएको र सहभागीहरुका लागि मौलिक नेवारी परिकारहरु पनि व्यवस्था गरिनेछ।
गुथिका अध्यक्ष ओजेश सिंहले यस वर्ष शुरु गर्न लागेको बिस्केटजात्रालाई आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिने योजना रहेको बताए। बेलायतमा नेवारी संस्कृति र परम्पराको प्रवर्द्धन तथा यतै हुर्किंदै गरेको नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण नै जात्राको प्रमुख लक्ष्य रहने उनको भनाइ छ। पासा पुचः गुथि यूकेले यसहघि पनि बेलायतमा म्हः पूजा,योमरी पुन्ही,नेवा भ्वयः (नेवा भोज) लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ ।
दीपकको 'मन मगन' यात्रा भक्तपुरबाट शुरु हुने
नागरिकता स्वतः खारेज हुने, प्रयोग गरे ७ बर्ष जेल हुन सक्ने पनि ? उ
सावधान ! फोनबाट क्यान्सर सम्म हुने विकिरण उत्पन्न हुन्छ ! यसरी बच्नुस् विकिरणबाट !